COVID-19: Maxkamaddahu waxa ay joojiyeen ganaaxyadii, qaadidii iyo Xayiraadihii la saari jirey Laysinada Gawaarida Xilligan Cudur Faafidu | LawHelp Minnesota
COVID-19: Maxkamaddahu waxa ay joojiyeen ganaaxyadii, qaadidii iyo Xayiraadihii la saari jirey Laysinada Gawaarida Xilligan Cudur Faafidu
Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2020/4/20
Laga bilaabo Maarso 6 keeda 2020 ka, Maxkamaddaha Minnesota waxa ay bedeleen sida ay u qaadaan qaar ka mid ah talaabooyinkooda iyadoo sababtu tahay dillaaca cudurka COVID-19.
Maxkamaddahu Wali Ma Furan Yihiin?
Haa, maxkamaddahu waa furan yihiin. Laakiin HA TAGIN maxkamad hadii aadka maarmi karto.
Wixii akhbaar ah ee dheeraadka ah, booqo kana eeg shabakada Maxkamadda.
waxa ay soo diraan ogaysiisyo ah lacagaha lagu kordhiyo ganaaxyada aan la bixin
lacagahaa waxaa lagu kordhiyaa ganaaxyada kolka dadku uusan bixin tikirdhkooda
xayiraad ayaa la saari karaa laysinkooda iyana kolka qofku uu maxkamada u gooyo
waxaa loo diraa warbixinta lacagaha aan la bixin Waaxda Canshuuraha si loo soo gooyo
Maxkamaddahu waxa ay joojin doonaan dhamaan wixii falalkaa la xiriira ilaa iyo bisha Abriil 15, 2020.
Tigidhyo caynaa ah weeye kuwa aan ganaaxooda la kordhinayn hadii aan la bixin?
Ilaa iyo Abriil 15, 2020, maxkamaddahu ma kordhin doonaan lacagta tigidhada ama ganaaxyada aan weli la bixin ee hoos ku xusan:
Kalluunka & Xayawaanka Duurjoogta ah
Ganaaxyada DNR ka
Uma soo diri doonto ogaysiisyo ku saabsan lacagta lagu kordhiyo ganaaxyada aan la bixin.
Ka waran haddii aanan garanayn in ganaaxa la iga rabo inaan bixiyo iyo in kale?
Bishii Abriil 9, 2020, maxkamadahu waxa ay ku dareen muddo 60 cisho oo kale bixinta ama maxkamad uga mudicida ganaaxyada.
Haddii aadan hubin in ganaaxaaga ay saameeyeen isbedelada soo kordhay iyo in kale, wac maxkamadda degmadda tigidhka lagugu siiyey ama Rugta Bixinta Lacagaha ee Maxkamadaha (Court Payment Center).
Waxaad ka heli kartaa telefoonka maxkamadda degmadaadda bogga Maxkamadaha Minnesota ee (COVID-19): http://www.mncourts.gov/Emergency.aspx. hoos u wad si aad u hesho akhbaarta maxkamadda lagala xiriiro.
Rugta Bixinta Lacagaha ee Maxkamadaha (Court Payment Center) lambaradeedu waa 651-381-3219 Nawaaxiga Magaalooyinka Mataanaha ah (Twin Cities Metro) ama 800-657-3611. Shabakaduna (website) waa: http://www.mncourts.gov/Pay-a-Fine.aspx
Ka waran tigidhada ama ganaaxyada jaa waqtigii la rabay in la bixiyo la soo dhaafay?
Maxkamaddahu waxa ay u gudbin karaan kiisaska waqtigii la rabay lacagtooda in la bixiyo la soo dhaafay Waaxda Canshuuraha si loo soo gooyo lacagtooda. Ilaa laga gaarayo Abriil 15, 2020 ka maxkamadahu meelna uma gudbin doonto kiisaskaa mudaddii la rabay in ganaaxooda la bixiyo la soo dhaafay. Bishii Abriil 9, 2020, maxkamadahu waxa ay yiraahdeen arrintan waanu ay sii wadi doonaa ka dib bisha Abriil 15.
Ka waran haddii aan rabo inaan ka mudaco tigidh la I siiyey?
Balamahii dhageysiga dacwooyinka tigidhada lacagta uun in la iska bixiyo ah waa la joojiyey ilaa laga gaarayo bisha Maajo 4, 2020.
Jidka kaliya oo dacwadaadda lagu dhageysan karo ka hor Maajo 4, 2020 waa hadii maxkamadu ay isticmaasho tiknoolajiyo adigoo meel kale jooga khadka lagu soo geliyo, sida fiidyow dacwo ku qaadid oo kale. Hadii tigidhka lagu siiyey Degmadda Hennepin, waa ay sameyn karaan inay qaadaan dacwadaadda adigoo meel kale jooga. Wac 651-281-3219 (magaalooyinka) ama 800-657-3611 (wixii ka baxsan nawaaxiga magaalooyinka) si aad u sameysato balan dacwo qaadid ah.
Maxaa ka jira iyana arrinta laysin xayiraadyada?
Caadiyan, Laysinkaaga waa la xayiri karaa kiisaska qaarkood hadii aadan maxkamadooda imaan. Dhagaysigii dacwooynka hadda intoodii badnayn dib baa loo wada dhigay ilaa bisha May 4, 2020 ama ka gadaal. Iminka maxkamaddahu ma xayiri doonaan laysinkaaga hadii aadan maxkamadda imaan. Waxaa dhici karta inay jiraan waxyaabo laga reebtay taa.
Haddii aadan hubin inaad u baahan tahay inaad maxkamadda tagto ama in la qaadayo dacwadaadda iyo in kale, wac maxkamadda dacwadaaddu ka dhacayso. Ka hel telefoonka maxkamadda degmadaadda bogga Maxkamadaha Minnesota ee (COVID 19): http://www.mncourts.gov/Emergency.aspx. hoos u wad si aad u hesho akhbaarta maxkamadda lagala xiriiro.
Hadii aan rabo inaan lacagta iska bixiyo ka waran?
Weli waad ka bixin kartaa lacagaha Rugaha Bixinta Lacagaha ee Maxkamaddaha (Court Payment Center) hadii lacagta u bixinayso inaad soo ceshato laysinkaaga. Wixii akhbaar ah ee ku saabsan bixinta lacagaha ka eeg shabakada Rugaha Bixinta Lacagaha ee Maxkamadaha (Court Payment Center) website. Waxaad kaliya oo khadka (on-line) lacag ku bixin kartaa hadii aad isticmaasho shabakad ama wacdo Rugaha Bixinta Lacagaha ee Maxkamadaha (Court Payment Center.)